९ घण्टासम्म लोडसेडिङ ! व्यापारमा घाटा « News24 : Premium News Channel
हुम्ला । हुम्लाका व्यवसायी लोडसेडिङका कारण अप्ठ्यारोमा परेको छन् । दैनिक ८ देखी ९ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएपछि व्यापार व्यवसाय तथा कार्यालयमा असर परेको छ । विहान ६ देखि १० बजेसम्म र बेलुका ४ देखि ८ बजेसम्म विद्युत् आपूर्तीमा कटौती भएपछि काम गरेर खान सक्ने वातावरण नभएको आइ.टी. टेक्नोलोजीका सञ्चालक गगन ऐडीले दुखेसो गरे ।
हाल १ सय ८० किलोवाट मात्र पानी भएको र २ वटा टर्वाईन मध्ये एक मात्र टर्वाईनबाट मात्र विद्युत उत्पादन गर्न सकिएको बोहोराले बताए । बहाव कम हुने समयमा पानी रिजर्व गर्न ५ करोड लागतमा बनाइएको ट्याकी प्रयोग विहिन बनेको छ । नयाँ पत्रिकाबाट